LINUX ကိုအတွက်တွေ့ရှိမှု COMMAND ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာများ - LINUX ကို - 2019
အဓိက Linux ကို
Linux ကိုအတွက်တွေ့ရှိမှု command ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဥပမာများ
ကွန်ပျူတာနှင့်လက်တော့ပ်များအားလုံးသည်အသုံးပြုသူများသည်အစဉ်အမြဲမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရသာများနှင့်ဦးစားပေးအညီ operating system ကိုထူထောင်ကြသည်။ သို့သော်ရိုးရိုးဒီသို့မဟုတ်ကြောင်းကို item ကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုမသိရပါဘူးသူတွေကိုတစ်ဦးအမျိုးအစားလည်းမရှိ။ ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာအကြှနျုပျတို့သညျကို Windows 10 မှာမျက်နှာပြင်၏အရောင်အဝါညှိကူညီနိုင်ဖို့နည်းလမ်းအနည်းငယ်အကြောင်းကိုသင်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်အောက်ပါအဆင့်တွေကိုအပေါငျးတို့သ Windows 10 ကို Pro ကိုအပေါ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုရန်သင့်အာရုံကိုခေါ်ပါ။ သင်တစ်ဦး operating system ကိုကတခြားထုတ်ဝေရှိပါကပစ္စည်းအချို့ကိုသင်ကရိုးရိုး (ဥပမာ, Windows 10 ကိုလုပ်ငန်း ltsb များအတွက်) မတည်ရှိပါဘူးနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အောက်ပါနည်းလမ်းများထဲမှထူးခြားသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဖော်ပြချက်မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်။
Method ကို 1: မာလ်တီမီဒီယာကီးဘုတ်
ဤနည်းလမ်းကိုယနေ့အထိလူကြိုက်အများဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အားလုံးလက်ပ်တော့ built-in ပါပွီအများဆုံးခေတ်သစ်ကို PC ကီးဘုတ်ကြောင်းနှင့်လုံးဝ function ကိုအလင်းရောင်မှိန်ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, ကီးဘုတ်ချကိုင် "Fn" နှင့်အရောင်အဝါကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်ဖို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဤခလုတ်မြှားတို့ကိုပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ် "လက်ဝဲ" နှင့် "ညာဘက်"
ဖြစ်စေ "F1 ကို-F12" (ထိုကိရိယာ၏ထုတ်လုပ်သူပေါ် မူတည်. ) ။
သငျသညျကီးဘုတ်သုံးပြီးအရောင်မပြောင်းနိုင်လျှင်, ထို့နောက်စိတ်မပူပါနဲ့။ ထိုသို့ပြုမှအခြားအမှုနည်းလမ်းများရှိပါသည်။
Method ကို 2: System ကိုန့်သတ်ချက်များ
အဆိုပါမော်နီတာ၏အရောင်အဝါရှိနိုင်ပါသည် Adjust နှင့်စံ operating system ကို setting များကို အသုံးပြု. ။ ဒီနေရာတွင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလဲ:
ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်လက်ဝဲဘက် mouse ကိုခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ "Start" မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်လက်ဝဲထောင့်၌။
အနည်းငယ်ခလုတ်ကိုအထက်တွင်ပြတင်းပေါက်အတွက် "Start"သင်ကဂီယာ၏ပုံရိပ်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ။
ထို့နောက် tab ကိုသွားပါ "စနစ်".
အလိုအလျှောက်အပိုဒ်ခွဲဖွင့်လှစ် "Screen"။ ဒါဟာသူကြီးနှင့်ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်၏ညာဘက်အခြမ်းတွင်သင်သည်ရောင်ခြည်ညှိနှိုင်းမှုနဲ့တီးဝိုင်းကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ လက်ဝဲသို့မဟုတ်ညာဘက်က Moving, သင်သူတို့ကိုယ်သူတို့များအတွက်အကောင်းဆုံး mode ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
Method ကို 3: Notification Center
ဤနည်းလမ်းကိုအလွန်ရိုးရှင်းပြီးပေမယ့်တဦးတည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။ 25, 50, 75 နဲ့ 100% - သာသတ်မှတ်ထားတဲ့တောက်ပတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်အသုံးပြုဆိုတဲ့အချက်ကို။ ဒါဟာသင်သမိုင်းမှတ်တိုင်များကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်။
ခလုတ်ကိုအပေါ်မျက်နှာပြင်ကလစ်၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာ "Notification Center".
တစ်ဦးက window ကိုအများအားဖြင့်အကြောင်းကြားစာစနစ်များကိုအမျိုးမျိုးပြသသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အောက်ခြေတွင်သင် button ကိုတွေ့ရှိရန်လိုအပ်ပါတယ် "ပွင့်လင်း" ထိုသို့နှိပ်ပါ။
လက်ဝဲ mouse ကိုခလုတ်ညွှန်ပြအိုင်ကွန်ပေါ်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်, သင်သည်ရောင်ခြည်အဆင့်ကိုပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။
လိုချင်သောရလဒ်အောင်မြင်လျှင်, သင်သည်ပိတ်လိုက်လို့ရပါတယ် "Notification Center".
Method ကို 4: မှာ Windows Mobility ကိုရေးစင်တာ
ဤသည်ကို default နည်းလမ်း Windows operating system 10 နှင့်အတူမှတ်စုစာအုပ်သာပိုင်ရှင်တွေကိုအသုံးပြုစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်သို့သော်စာရေးကိရိယာကွန်ပျူတာပေါ်မှာဤ option ကို enable လုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမယ့်နည်းလမ်းရှိနေတုန်းပဲ။ ဤသည်ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
သင်မှတ်စုစာအုပ်၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါကလျှင်, တစ်ချိန်တည်းမှာကီးဘုတ်ပေါ်မှာသော့ကိုနှိပ် "ဟုဦးဝင်း + X" ခလုတ်ကိုပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ယွမ်ကလစ် "Start".
သင်လိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်ဖို့လိုအပ်သည့်အတွက် Context Menu က "Mobility ကိုရေးစင်တာ".
ရလဒ်အနေနဲ့သီးခြားပြတင်းပေါက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ပထမဦးဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှု၌သင်တို့ကိုစံတီးဝိုင်းညှိနှိုင်းမှုနှင့်အတူတောက်ပညှိနှိုင်းမှုကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ၎င်း၏ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ညာဖက်ရန် slider ကို Moving, သငျသညျအညီအရောင်ကိုလျှော့ချသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
သင်တစ်ဦးစံကို PC ပေါ်မှာပြတင်းပေါက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်, တကနည်းနည်းမှတ်ပုံတင်တည်းဖြတ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
တစ်ပြိုင်နက်ကီးဘုတ်ခလုတ်များကိုနှိပ် "ဟုဦးဝင်း + R ကို".
ရလဒ်ဝင်းဒိုးကိုတှငျကြှနျုပျတို့ဒီ command ထား "regedit" နှင့်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Enter".
ပြတင်းပေါက်၏လက်ဝဲပိုငျးတှငျသငျသညျဖိုင်တွဲသစ်ပင်မြင်လိမ့်မည်။ ပွင့်လင်းအပိုင်း "HKEY_CURRENT_USER".
အခုတော့တူညီတဲ့လမ်းအတွက်ကျွန်တော်ဖိုင်တွဲကိုဖွင့ ်. "ဆော့ဖ်ဝဲလ်" ကြောင်းအတွင်း၌ဖြစ်ပါသည်။
ဒါကပိုရှည်စာရင်းဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဖိုင်တွဲကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သောကြောင့် "Microsoft က"။ ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုနှင့်အတူကအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါနှင့်ဖြတ်လမ်း menu ထဲကလိုင်းကို select "Create"ထို့နောက်ကို item ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ "ပုဒ်မ".
အသစ်ဖိုင်တွဲကိုခေါ်ရပါမည် "MobilePC"။ ထို့ပြင်ဤ folder ထဲတွင်သင်သည်အခြားတဦးတည်းကိုဖန်တီးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအချိန်, ကဟုခေါ်တွင်စေသင့်တယ် "MobilityCenter".
ဖိုင်တွဲပေါ် "MobilityCenter" ညာဘက်မောက်စ်ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ လိုင်းများ၏စာရင်းထဲက Choose "Create"ထို့နောက်ကို item ကို select "တစ်ဦး DWORD ချိန်ညှိခြင်း".
နယူး parameter သည်နာမည်တစ်ခုပေးထားတဲ့ခံရဖို့ "RunOnDesktop"။ ထိုအခါသင်သည်ဖိုင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကတန်ဖိုးသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ် "1"။ ထို့နောက်ကိုပြတင်းပေါက်၌ button ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အိုကေ".
အခုဆိုရင်သင် Registry Editor ကိုပိတ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, မိုဘိုင်းစင်တာကို PC ပိုင်ရှင်တွေမဟုတ်နိုင်ကိုဖေါ်ပြဖို့ Context Menu ကအသုံးပြုပါ။ ထို့ကွောငျ့, ကီးဘုတ် shortcut ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ် "ဟုဦးဝင်း + R ကို"။ ပေါ်လာပြတင်းပေါက်မှာ command ကိုရိုက်ထည့်ပါ "Mblctr" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Enter".
သငျသညျ re-ချေါ Mobility ကိုရေးစင်တာမှအနာဂတ်တွင်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုပါက, သင်ရုံကနောက်ဆုံးအချက်ပြန်လုပ်ပေးနိုင်သည်။
Method ကို 5: ပါဝါချိန်ညှိမှုများ
ဤနည်းလမ်းကိုဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီအပှေါစစ်ဆင်ရေးနှင့်ဘက်ထရီသက်တမ်းများအတွက်ယူနစ်၏အရောင်အဝါညှိပါလိမ့်မယ် install လုပ်ပြီး Windows ကို 10 နှင့်အတူမိုဘိုင်းဖုန်းများသာပိုင်ရှင်တွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါဖွင့်လှစ် "Control Panel ထဲက"။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သီးခြားဆောင်းပါးထဲမှာဖတ်နိုင်ဒီလိုလုပ်ဖို့အားလုံးဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းများ။ ကျနော်တို့သော့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် "ဟုဦးဝင်း + R ကို"စာရိုက်ခြင်းအားဖြင့် "ထိန်းချုပ်ရေး" နှင့်စာနယ်ဇင်း "Enter".
အသေးစိတ်: အ "Control Panel ထဲက" ဖွင့်ဖို့6နည်းလမ်းများ
အပိုင်း၏စာရင်းထဲက Choose "ပါဝါ".
Next ကိုသင်လိုင်းပေါ်တွင်ကလစ်လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် "ပါဝါအစီအစဉ်ချိန်ညှိခြင်း" သငျသညျတက်ကြွရှိသည်တိုက်နယ်များ၏ရှေ့မှောက်၌။
တစ်ဦးကဝင်းဒိုးအသစ်ဖွင့်လှစ်။ ဒါဟာသင်တစ်ခုခုရဲ့စစ်ဆင်ရေး၏နှစ်ဦးစလုံးသည် Modes များအတွက်ရောင်ခြည်တန်ဖိုးကိုမသတ်မှတ်နိုင်ပါလိမ့်။ သင်ရုံ setting ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘယ်ဖက်သို့မဟုတ်ညာဖက်ရန် slider ကိုရွှေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တည်းဖြတ်ခလုတ်ကိုနှိပ်ဖို့မမေ့မလြော့ပါအောင်ပြီးနောက် "Save Changes"။ ဒါဟာ window ၏အနိမ့်စိတျအပိုငျးတွင်တည်ရှိသည်။
desktops တွေနဲ့ပေါ်မော်နီတာ setting များကိုပြောင်းလဲခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့အားလုံးသည်နည်းလမ်းများအဓိကအားလက်ပ်တော့များအတွက်သက်ဆိုင်ဖြစ်ကြသည်။ သင်တစ်ဦးစာရေးကိရိယာကို PC ရဲ့ Monitor ပေါ်မှာပုံရိပ်ကို၏အရောင်အဝါကိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်, ဤကိစ္စတွင်အတွက်အထိရောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ကိရိယာပေါ်တွင် setting ကိုတစ်ဦးသင့်လျော်သောညှိနှိုင်းမှုလိမ့်မည်။ ဒါကအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများလိုအပ်ပါတယ်:
အဆိုပါမော်နီတာထိန်းချုပ်မှုခလုတ် Locate ။ သူတို့ရဲ့တည်နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ်မော်ဒယ်နှင့်စီးရီးအပေါ်လုံးဝမူတည်ပါသည်။ ဘေးထွက်သို့မဟုတ်နောက်ကျောဘက် - အချို့သောမော်နီတာတွင်ထိုကဲ့သို့သောထိန်းချုပ်ရေးစနစ်၏အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်မှာစဉ်အောက်ခြေမှာဖြစ်နိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ခလုတ်ဤကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့:
ခလုတ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်မဟုတ်သို့မဟုတ်သတ်သတ်မှတ်မှတ် icon များဖြင့်လိုက်ပါသွားကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင့် Monitor ဟာအဘို့အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုသူရဲ့လက်စွဲအပေါ်ကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်အခြားအလိုရှိသော parameter သည် brute အင်အားကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားကြိုးစားပါ။ အထက်ပုံအဖြစ်သီးခြား button ကိုတာဝန်ပေးအလင်းမှိန်ခြင်းအဘို့အခြို့သောမော်ဒယ်များအပေါ်သတိပြုပါ။ parameter သည်သီးခြား Menu ထဲမှာအနည်းငယ်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပုန်းအောင်းစေခြင်းငှါလိုအပ်သောအခြား devices ။
လိုချင်သော parameter သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင်မထိုက်မတန်မြင်သည်အတိုင်း, ထိုလျှောညှိ။ ထိုအခါမဆိုဖွင့်လှစ်မီနူးကို exit ။ အပြောင်းအလဲများပြီးပြီစစ်ဆင်ရေးလိုအပ်ပါလိမ့်မည်မျှပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်, မျက်စိမှချက်ချင်းမြင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
အရောင် setting များ၏ဖြစ်စဉ်တွင်သင်သည်အခက်အခဲရှိပါက, သင်ရိုးရှင်းစွာမှတ်ချက်များအတွက်သင့် Monitor မော်ဒယ်ရေးလိုက်နိုင်ပြီး, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုပိုပြီးအသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှုကိုငါပေးမည်။
ဒီတွင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူက၎င်း၏ယုတ္တိနိဂုံးရောက်လေပြီ။ ကျနော်တို့ကဤနည်းလမ်းများထဲကတစ်ခုသင်မော်နီတာ၏အရောင်အဝါများလိုချင်သောအဆင့်သတ်မှတ်ထားဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်မတူညီတဲ့အမှားတွေကိုရှောင်ရှားရန်အပျက်အစီးကနေ operating system ကိုအပြစ်ကိုပယ်ရှားဖို့မေ့လျော့ကြပါဘူး။ သင်ကမည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကိုမသိကြပါလျှင်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်ကြားရေးပစ္စည်းဖတ်ပါ။
https://termotools.com my.termotools.com © Linux ကို 2019